गर्भनिरोधक चक्की सेवनको तालिका छुटेमा के हुन्छ - खबर मलाई
२९ श्रावण २०७६, बुधबार २९ श्रावण २०७६, बुधबार खबर मलाईLeaveaComment on गर्भनिरोधक चक्की सेवनको तालिका छुटेमा के हुन्छ
अनिच्छित गर्भ रोक्नका लागि महिलाले गर्भनिरोधक गोली अर्थात बर्थ कन्ट्रोल्स पिल्स सेवन गर्छन् । यदि कुनै दिन उक्त चक्की सेवन गर्न भुलियो भने के यसले तपाईं गर्भवती हुने सम्भावना बढ्छ ?
कसलाई आवश्यक छ चक्की
सामान्यत गर्भनिरोधक चक्की त्यही महिलालाई सेवन गर्नका लागि सुझाव दिइन्छ, जो यौन रुपले सक्रिय छन् र गर्भावस्थाबाट सुरक्षा चाहन्छन् । यौन गतिविधिमा सक्रिय भएर पनि बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् । उनीहरुलाई नै गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्नका लागि सुझाव दिइन्छ ।
आपतकालिन र गर्भनिरोधक चक्कीमा के फरक छ ?
धेरैजसो महिला यसमा द्विविधाग्रस्त हुन्छन् । कन्ट्रसेप्टिव पिल त्यो हो जसलाई तपाईं आफ्नो महिना अनुसार सेवन गर्नुहुन्छ । यद्यपि जसले कुनै सुरक्षा विधी नअपनाई यौन सम्बन्ध बनाउन पुग्छन् उनीहरु संभावित गर्भबाट बच्नका लागि चक्की दिइन्छ, जसलाई आपतकालिन चक्की भनिन्छ ।
गर्भनिरोधक चक्कीले कसरी काम गर्छ ?
खासगरी यो चक्की सेवन गरेपपछि ओभुलेसन रोकिन्छ, जसले अन्डा ओभरिजबाट बाहिर निस्कन पाउँदैन । यदि अन्डा ओभरीबाट बाहिर आएमा त्यो स्पर्मको सम्पर्कमा आउन सक्छ । यद्यपि सबै चक्कीले यसरी काम गर्दैन । केही चक्की गर्भाशयको भित्र बन्ने पत्रलाई अरु मोटो बनाइदिन्छ, जसले गदार्न स्पर्म अन्डासम्म पुग्न पाउँदैन ।
कति प्रभावकारी हुन्छ यो चक्की ?
विज्ञहरुका अनुसार यो चक्की तब प्रभावकारी हुन्छ, जब यसलाई समय र सही ढंगले सेवन गरिन्छ । यदि महिलाले बिचमा कुनै दिन चक्की सेवन गर्न छाडेमा गर्भवती हुने संभावना बढ्छ । यदि चक्कीको कोर्सको पुरा गर्नुभएको छ भने यसले ९९ प्रतिशत काम गर्छ ।
के हुन्छ यदि तालिका छुटेमा ?
एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनबाट बनेको यो कम्बिनेसन चक्कीले हर्मोनको हरेक महिना हुने परिवर्तन वा अस्थिरतालाई रोक्छ, जसले ओभ्युलेसन रोक्छ । अहिले यो चक्की यसरी तयार गरिएको छ कि त्यसको असर २४ घण्टासम्म रहन्छ । यस्तोमा जब तपाई चक्की लिन भुल्नुहुन्छ तब हर्मोनको स्तर तल र्झन पुग्छ । यही कारण टाउको दुख्ने, पेटमा गडबडी हुने, वान्ता हुने जस्ता साइड इफेक्ट देखापर्छ । विज्ञका अनुसार यदि तपाईंले यो चक्की लिन छुटाउनु भयो भने हर्मोन्सको स्तर सामान्यबाट तल र्झन पुग्छ, जसले गर्दा गर्भवती हुने संभावना बढ्छ ।
यदि तपाईंले मिड प्याकलाई बिचमा छाडिदिनुभयो भने वा चक्की सेवन गर्न भुल्नुभयो भने यसले महिनावरी चक्र पनि बिग्रन्छ जुन सामान्य हुनमा निकै समय लाग्छ । किनभने यसले ओभ्युलेसन चक्रलाई कन्ट्रोल र प्रोटेक्ट गर्छ । यसैले चक्की लिइएन भने ओभ्युलेसनमा असर पर्छ, जसले अन्डा ओभरीजबाट बाहिर निक्लन सक्छ । साथै यसबाट हल्का रक्तश्राव पनि हुनसक्छ ।
हरेक दिन चक्की सेवन गर्नुहुन्छ भने सकेसम्म एउटै समयमा लिने गर्नुहोस् । यसले गर्दा हर्मोन सन्तुलनमा रहन्छ । धेरै भन्दा धेरै एक वा दुई घण्टाको तल माथि चक्की लिने समय फेरबदल हुनसक्छ । यद्यपि यो समय पनि धेरै घटबढ भएमा गर्भवती हुने संभावना बढब्छ ।
यदि पूर्ण रुपले चक्की छाड्नुभयो भने के हुन्छ ?
जब महिला प्रेग्नेन्सीका लागि पूर्ण रुपले तयार हुन्छन् तब यो चक्कीलाई बिचमा सेवन गर्न बन्द गर्न सक्नुहुनछ । चक्की सेवन गर्न छाडेपछि मासिक स्राव र ओभ्युलेशन चक्त सामान्य हुनमा थोरै समय लाग्छ । यसका साथै अचानक बीचमा छाड्दा मुड स्विङ, कपाल पातलो हुने जस्ता समस्या आउन सक्छ । यस्तो भएमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
अब कुरा आउँछ कि यो चक्कि नियमित रुपमा सेवन गरिरहनुभएको छ । यौन क्रियाकलापमा पनि संलग्न भइरहनुभएको छ । गर्भवती हुन चाहनुहुन्न । यद्यपि भुलेर कुनै दिन तपाईंले यो चक्की लिन भुल्नुभयो । जतिबेला सम्झनुहुन्छ तत्काल अर्थात चाडो भन्दा चाडो चक्की सेवन गर्नुहोस् । जति चाडो गर्नुहुन्छ, खतरा उतिनै कम हुन्छ ।
अब चितवनमै कलेजो प्रत्यारोपण हुने, नेपालमा कति छन् कलेजोका बिरामी?
१४ श्रावण २०७६, मंगलवार १४ श्रावण २०७६, मंगलवार खबर मलाई
गोडाले पनि दिन्छ विभिन्न रोगको संकेत
१२ श्रावण २०७६, आईतवार १२ श्रावण २०७६, आईतवार खबर मलाई
यी रोगको ओखती हो आँप